Krismasy Nilahatra Solitany Noho ny Tsy Fisiany Tao Nizeria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2017 14:33 GMT
Fitohanan'ny fiara tao Lagos, Nizeria. Sary tamin'ny taona 2008, avy amin'ny BBC World Service. CC BY-NC 2.0
Nandany ora maromaro tao anatin'ny fiaran'izy ireo ny Nizeriana, nihitsoka teny an-dalana ary tsy afaka nody tany an-tanindrazany hankalaza ny Krismasy satria niharan'ny tsy fahampian-tsolika goavana ny mpamokatra solika lehibe indrindra aty Afrika.
Ho an'ny sasany, naharitra hatramin'ny maraimben'ny 25 Desambra ny fiandrasana satria mpamily an'arivony no nilahatra tao amin'ny tobin-dasantsy nanantena hody ara-potoana mba hankalaza ny noely. Nampiato ny asany ho an'ny taona mihitsy aza ireo orinasam-pitaterana sasany, raha nampiakatra ny saran-dalana hatramin'ny 300% kosa ny hafa. Loharanon'ny fahasorenana ao amin'ny firenena izay manana fomban-drazana mafonja amin'ny fiarahana amin'ny fianakaviana amin'ny Krismasy izany.
Nampiseho ny filaharana tao an-tanànan'i Abuja ny lahatsary navoakan'i @i_am_Anomeli tao amin'ny Twitter:
Tobin-dasantsy Conoil Filling, Opp NNPC Towers, CBD, Abuja
Jereo fotsiny. Tsy ilaina ny fanehoan-kevitra
Niresaka am-pahibemaso voalohany momba ny tsy fahampian-tsolika goavana naharitra telo herinandro taorian'ny nanombohany, nilaza ny filoha Nizeriana Muhammadu Buhari hoe:
Mampalahelo ny tsy fahampian-tsolika iainana manerana ny firenena. Miray fo amin'ny Nizeriana rehetra aho, ny amin'ny tsy maintsy hiaretana filaharana solika. Ampahafantarina tsy tapaka aho, indrindra mikasika ny firotsahan'ny NNPC an-tsehatra mba hiantohana fa ampy ny solika mandritra ity fotoana ity sy ny aorian'izany.
Milaza ny orinasam-panjakana momba ny solika izany NNPC izany.
Saingy haingana avy hatrany ireo mpitsikera nilaza fa nilatsaka taorian'ny hafatra navoakan'i Atiku Abubakar, filoha lefitra nandritra ny fitantanana teo aloha sy mety ho mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena Nizeriana amin'ny taona 2019 ny fanambaran'i Buhari:
Any amin'ny tsirairay izay mitolona mba hahita ireo namany sy fianakaviany mandritra ity fotoana fankalazana ity noho ny #tsy fisian'ny solitany ny tenako ary matoky aho fa rehefa miray hina isika amin'ny maha firenena iray antsika, dia afaka mahita vahaolana amin'ity krizy ity.
Nihevitra kosa ny sasany fa ny fanambaran'ny filoha dia nateraky ny sioka nalefan'ny mety ho mpifaninana aminy.
Nisioka mikasika ny tsy fisian'ny solika ankehitriny i Buhari, ora vitsy taorian'ny siokan'i Atiku …
TSIKARITRA: namoaka Hafatra Krismasy ho an'ny Nizeriana vao omaly i @MBuhari ary tsy nilaza ny tsy fisian'ny solika mahatezitra tokoa. Inona no niova tampoka teo anelanelan'ny teo sy ny amin'izao fotoana izao?
FANONTANIANA: Raha tsy nisioka momba izany i @atiku androany maraina, moa niresaka momba izany ve i Buhari androany?
Ao anatin'ny krizy, nanaporofo ny mponina sasany ao Nizeria, toerana iray voalaza fa be fanantenana indrindra eto an-tany, fa fantatr'izy ireo ny ny fomba hijanonana ho faly. Mpisera Twitter Jude kosa nizara ity avy ao amin'ny tobin-tsolika ao Lere, tanàna iray ao amin'ny firenena avaratr'i Nizeria:
Faly-faly hatrany ny Nizeriana saranga antonony. Ato amin'ity tobin-tsolika ao Lere ity aho, ary nisy olona nitabataba hoe ‘tratry ny Krismasy’ tao anatin'ny filaharana, namoaka labiera avy ao anaty baoritra sy nanomboka nizara boatin-dabiera ho an'ny tsirairay. Eto izahay mandritra ny 2 andro
Na izany aza, tsy ny rehetra no toa faly. Betsaka ny olona tezitra, ary ny sasany namoaka sary-sy-soratra (PMB, manondro ny filoha Buhari):
Ity no tsy fisian'ny solika faha-telo teo ambany ny fitantanan'i Buhari tao anatin'ny roa taona sy tapany. Ny voalohany dia tamin'ny Sept-Desambra 2015. Nijaly nandritra ny 3 volana i Nizeria saingy tsy ni-pimaso i PMB. Ny faharoa dia tamin'ny Aprily / May 2016 izay nampitombo ny vidin'ny solitany N87 – N145 izy ary ankehitriny ny volana Desambra 2017. Buhari sy ny fahavitsian'ny solitany #fuelscarcity
Tsy miraharaha ny tsy fisian'ny solitany #FuelScarcity#EndSARS ny filoha @MBuhari ary mitomany ireo izay nifidy azy. Tsy mba nisahirana akory nanazava ny anton'izao zava-mitranga ankehitriny izao akory ity lehilahy ity izay mahafantatra tsara ny vola very amin'ny filaharana solitany noharina tamin'ny resaka ora fiasàna, taona vitsivitsy lasa izay!
Ny Hira Krismasy an'i Buhari